Maitiro ekuvandudza mashandiro e iPhone yako ipapo | IPhone nhau
Maitiro ekukurumidza kugadzirisa mashandiro eiyo iPhone yako
iOS haisi sisitimu inoshanda ine matambudziko makuru esoftware, asi ichokwadi kuti vashandisi vazhinji vari kunyunyuta nezvazvo nyaya dzekuita, kunyanya kubva pakauya yazvino vhezheni yeApple's mobile operating system, iOS 9. Vakwegura zvishandiso ndivo vanonyanya kukanganiswa uye chimwe chezvikonzero chingave chiri chakaderera RAM, ichisara pa512mb chete kana iyo iPhone iri iPhone 4. Chii chatinogona kuita kunatsiridza mashandiro? Zvakanaka, pane hunyengeri hwakareruka izvo ini ndakave nechokwadi kuti zvinoshanda.
Maitiro eApple ekugadzirisa RAM anowanzo shanda, asi izvi hazvireve kuti zvakakwana. Dzimwe nguva tinogona kuda sunungura imwe ye RAM, iyo inozongoshandiswa chete nemaapplication atinovhura kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Iko kune mafomu muApp Store ayo anotozviita, asi hunyengeri hwatinokuunzira nhasi tinoita pasina hwechitatu-bato kunyorera uye isu tinozviita mukati memashure memaminitsi gumi.
Maitiro ekuvandudza mashandiro eiyo iPhone
Tinodzvanya nekubata bhatani rekurara kusvikira taona iyo mubato.
Isu tinosunungura bhatani rekurara.
Isu tinodzvanya bhatani rekutanga kudzamara rapinda mumba skrini.
Iko kuvandudza kuri ipapo. Zvine musoro, haufanire kushandisa hunyengeri kana iwe uri kuita chakakosha kumashure. Ini ndakazviedza uye pandinopinda muSafari zvakare, ese matabo akadzorera zvakare, uye kunyange mamwe acho haana kuzopedza kushanda sezvaaifanira. Asi, kune rimwe divi, ini ndaona iyo sisitimu yakanyanyisa kuerera, kunyange chiri chokwadi zvakare kuti inogona kunge iri zvishoma yeiyo placebo mhedzisiro. Kana iwe uine iPhone iyo inokupa iwe kuita kwekuita, iwe unogona kuyedza uye nekutaura pane chako chiitiko. Ko hunyengeri hwakareruka hwakavandudza mashandiro ako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekukurumidza kugadzirisa mashandiro eiyo iPhone yako
Ndakazviedza uye ini ndaona kuti maApp akavhurwa ese akagadzirwazve, asi hapana kuvandudzwa kwekuita. Icho chaicho iOS 9.1 pane iyo iPhone 5S inoenda senge pfuti isina kuita kuyedza. Izvi zvinoshanda kune iOS 8?
Ndine urombo kukupikisa, asi iOS 9.1 inononoka kupfuura iOS 8.4.1 uye haina kana padhuze nepfuti kunyange kuidzorera kubva pakutanga (ini ndaive ne5S ine iOS 9.0.2 uye iOS 9.1), kuwedzera kune lag iyo havana kugadzirisa mushure meizvi. dzeshanduro dzinoverengeka dzeIOS .... Ngatitarisirei kuti iyo 9.2 inobuda yakakwenenzverwa uye iyo 5S inodzoka kuti itorezve yakarasika fluidity.
Inondishandira zvakafanana na8 Edza kudzorera.
Alx sae akadaro
hunyengeri uhu hunoshanda kubva kuios 3 zvinoita kwandiri ... zvirinani kubva kuiyos 4…. Ndakazviita pachizvarwa chechitatu iPod touch
Pindura Alx Sae
Zviripachena kuti Apple inowedzera kuita kuti iOS iwedzere kurema kuti isu vedu vanoshandisa iPhone vatenge vamwe nezvimwe zviwanikwa.
iOS 9 iri kuenda sedhongi!
Ford ichaunza Siri Eyes Mahara kune 2011 mamodheru zvichienda mberi
Cydia Online iyo webhusaiti nyowani iyo inotibvumidza isu kubvunza Cydia tweaks